Nageenya Daldalaa fi kan Qabeenyaa - City of Minneapolis
Trial Support & Safety
Deggersa Qorannoo Yakkaa fi kan Nageenyaa
Nageenya Daldalaa fi kan Qabeenyaa
Adeemsi qorannoo kun daldalaa fi qabeenyaa irratti dhiibbaa akkamii qabaachuu akka danda'uu, fi akkamiin qophaa'uu akka danda'u dubbisaa.
Karoora daldalaa ykn kan qabeenya keessanii qopheessuu
Karoora yeroo hatattamaa
Karoorri yeroo hatattamaa qabamuu isaa mirkaneessaa. Karoorri yeroo hatattamaa kun isiniin, maatii keessan, fi daldalli keessan yeroo balaa fi isaan boodas eegamaa akka ta'uuf gargaara. Karoora yeroo hatattamaa keessatti maaltu haammatamuu akka qabu qajeelfama waliigalaa argadhaa.
Waa'ee karoora yeroo hatattamaa uumuu caalmaatti hubachuu
Nageenya gamoo ykn kan qabeenya keessan eeguu
Daldalli dhuunfaa tarkaanfiiwwan nageenya fudhatamaa murteessuu barbaachisa. Gamoo keessaniifis filannoo tarkaanfii nageenya qaamaa dabaluu isin barbaachisa.
Yeroo qorannoo yakkaa keessa abbootiin daldalaa fi qabeenyaa yeroodhaaf gamoo isaanii keessa akka buufataniif ni hayyamamaaf.
Balbaloonni nageenyaa dhaabbatoon biizinasii kan daldalaa irratti akka fe'amuuf (installed) ta'uuf hayyamamanii jiru.
Hayyamni ijaarsa gamoo ni barbaachisu.
Yeroowwan sa'a hojiitti karaa foddaawwaniitiin argiiwwan banamoo akka ta'aniif balbaloonni nageenyaa banamanii turuu qabu.
Balbaloota naanna'an irratti mallattoowwan ykn fakkiiwwan hin hayyamamu.
Haala naannoo ijaarsa gamoo keessanii jiru ilaalcha keessa galchaa. Kanneen akka ujummoo ykn mukaa caccabaa kan rakkoo qaqqabsiisan ykn gubachuu danda'an dhabamsiisaa ykn qulqulleessaa. Kaampaanii kan baraarsaa keessanii waliin haasa'uudhaan poolisiin keessan kan ammayyoome ta'uu isaa fi poolisiiwwan baraarsaa keessanii hagam akka ta'e hubachuu keessan mirkaneessaa.
"online cloud service" irratti garagalcha kan dookumantootaa fi waraabbiiwwan eliktiroonikii fe'uu (fakkeenyaaf: Dropbox, Google Drive) fi/ykns hard-kophii isaa gara buufataa (off-site location) fiduu.
Hanga horii fi cheekiiwwan buufata irraa jiruu yarsaa.
Ibsa waantota barbaachisoo ta'anii foddaa irraa fageessuu.
Namoonni daldala isaaniitiif nageenya dabalataa barbaaduu akka danda'an hubanneerra. Yoo kampaanii nageenyaa waliin hojjechuu kan filattan ta'e, maaloo hojjetoota hayyama nageenyaa qaban qofaa qacaraa. Isaan kun namoota kanneen inshuuraansii mataa isaanii qabaatanii fi leenjii leenjii argatanii dha.
Waldaa Daldala Xixiqqaa Magaalaa Minneapolis
Waldaan Daldala Xixiqqaa kan Magaalichaa gaaffiiwwan waliigalaa abbootii qabeenyaa fi qabeenya-daldalaa ta'an waliin waa'ee qophiiwwan dursa-qorannaa yeroo yakaa taasifaman, yeroo qorannoo fi danbiiwwan naannootti taasifaman ilaalchisee ni keessummeessa.
Waldaa Daldala Xixiqqaa Magaalichaa Quunnamaa
Poolisiin Inshuuraansii kan inni fayyadu
Poolisii keessan kan Dipaartmentiin Daldala MN hubachuu fi/ykn kampaanii baraarsa keessanii waliin walhubannaa dhibaman hiikuudhaaf isin gargaaruu danda'a.
Giddu gala Tajaajila Maammilaa Daawwadhaa
Bilbila 800-657-3602 (Naannoo Twin Cities metro ala jiraataniif)
Hojii Daldalaa kan Magaalaa-guutummaa
Yeroo dhorkaawwan dhibee daddarbaa kanatti, giddu-galli magaalaa fi daldalli kan ollaa yeroo qorannaa yakkaatti banamoo ta'u.
Goleewwan daldalaa dabalatee giddu-gala magaalaa fi naannoowwan magaalichaa kan birootti dabalataanis aangawoota seera eegsisanii fi raayyaa Eegumsa Biyyaatu jiraatu.
Gamoowwanii fi tajaajilawwan magaalaa
Tajaajilawwan magaalaa kan itti fufan ta'u, baay'inaan karaa online sababa dhibee daddarbaatiif.
Naannoo buufata qorannoo yakkaa itti geggeeffamu kanatti, caasaan nageenyaa (kan Giddugala Mootummaa Hennepin), ijaarsi gamoowwan mootummaa fi mooraan poolisii ni argamu.
Email the Small Business Team